Buy Self Stirring Mug (12,000Ks) in ကမာရွတ် on ipivi.com
လူတိုင်းက ကိုယ့် ချစ်သူကြိုက်မဲ့အရာလေးတွေ လက်ဆောင်ပေးချင်ကျတာတော့ အမှန်ပဲလေ။
ချစ်သူလည်း ဖြစ်နိုင်သလို၊ ချစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့ ဖေဖေ၊ မေမေ၊ ဘိုးဘိုး၊ ဘွားဘွားလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်နော်။
အကြိုက်လေးတွေ စဉ်းစားပေးပီး လက်ဆောင်ပေးရတာတော့ ပိုရင်ခုန်ဖို့ကောင်းပါတယ်။
ကိုယ်ချစ်သူ(သို.) ကိုယ် ရဲ. အလေးထား တန်ဖိုးထားရတဲ့သူက ကော်ဖီကြိုက်တဲ့သူဆိုရင်တော့ ဒီခွက်လေးက ကော်ဖီချစ်သူတွေ အတွက် ရင်ခုန်စရာ ကော်ဖီဖျော်တဲ့ခွက်လေးပါပဲ။
ဇွန်းခွက်မလို လက်ကိုင်းမှာပါတဲ့ ခလုတ်လေးကို နှိပ်လိုက်ယုံပါပဲ။အထဲမှာ စတီးခံထားတဲ့ အတွက်ကြောင့် အပူက်ုလည်း ကြာရှည်ခံပါတယ်။
ကော်ဖီ ကြိုက်သူတွေအနေနဲ့လည်း ခရီးသွားတဲ့အခါ အရမ်းအဆင်ပြေတဲ့ ခွက်လေးပါပဲ။
ဈေးနှုန်း – ၁၂၀၀၀ ကျပ်
09 7844 19691 / 09 264686461
အမည်: Self Stirring Mug